Waagii Beryaaba Waayo Leh ! | Qaran News
Waagii Beryaaba Waayo Leh !
Writen by Qaran News | 7:18 am 27th Nov, 2021
Shir Reer g uu dhintay markay rag muraad lihi reeraha shir u qabtaan.
Gari waxay dhimatay markii ‘Illaahayaw eexna ha nagaga tegin, aqoonna ha nagu cadaabin’ afka laga dhawray, uurkana laga waayey.
Toliimo waxay baaba’day markay Rife iyo Rife kalkaal tolkii ka soo hadheen ee Nin iyo Nin kalkaal la waayey.
Mabda’ waxa diley NIN dhaameel maalinba meel ka gurta sidii gabadh walacday oo maalin walba ciida meel ka gurata.
Waxii xummi waxay sii xumaadeen marka dad aan aqoon ula hayn loo xulo in ay xalilaan waxa xun ee jira.
Taariikh sugan waxa la waayey markay bulsho aan waxba isu qirin isna qancin karini ay wada yeelatay.
Xisbi-furasho waxay macne samayn wedey markii reer reer loo kala baxay. Reer budad meel ka lulay maxuu kordhin?
Madaxnimo waxay xummaatay markay madaxdi la meeraystaan shicibkii u egmaday in ay hagaan, sidii waraabahii gaboobay ee Afarta jaho reerahii yaalay qaar raray ka cunay, qaar rimay ka laayey, qaar ka-reeb ka cunay, qaarna aaran, ee ku yidhi caruurtiisii i qaada markay qaadeena haddana ku yidhi dhinacna hayla kicina ee ila wareegeysta, intay naftu iga baxayso.
Wada-tashi iyo wax is-weydiini maxay tari haddii aan lays maqalayn oo is-maqalkii meesha ka baxay.
Aqoon-yahan waxa uu dhintay markii uu Aqoon-gaab arladii ka taliyey.
Talo waxay faro ka haaday markii run laysu sheegi waayey, markii halyeygii hooco laga dhigay, hacoogiina halyey soo baxay.
Wada-noolaansho waxa la waayey markii la yidhi laysu joojin maayo.
Dumarkii waxay hadal bateen oo makarafoonadii barteen markii ay
maqleen dawlad kasta haka muuqdaan.
Diimoqraadiyadii waxay dhimatay kolkii la yidhi: “Waa markayagii.”
Oday dhaqameed waxay maradi ka dhacday markuu siyaasad ka hadlay. Waar ka joog lahayde !
Siyaasiyiini waxay saqiireen markay sida ‘dhooreyda’ dadka dhaliila u jawaabayaan – kanley keerley, ee ay bujuubajaa ku hadlayaan.
Bal maamul wal oo Kulmiye u fiirsada wasiiradu waxay ku hadlaan markay Xisbiyada mucaaradka ah u jawaabayaan.
Af-hayeenka Xisbiga Kulmiye, Mr Buuni sets the example.